Wholesale Yepamusoro Yemhando Enamel Kuridza Mvura Tea Keturu 2.2L Chitofu Enamel Muridzo Keturu Mugadziri uye Mutengesi | Maokun
Yakakwira Hunhu Enamel Muridzo weMvura Tea Keturu 2.2L Chitofu Enamel Muridzo
Dhizaini Dhizaini: Modhen Luxury
Zvimiro: DIY, Yakasarudzika, Kushongedza, Chipo
Logo: Yakasarudzika logo
Chigadzirwa zita: Enamel ketera
Chinyorwa: Carbon simbi ine enamel kupfeka
Unyanzvi: 0.8 1.2 1.5 2.0 2.5
1. Yakachena uye yehutsanana, isina masimbi esimbi.
2. Zviri nyore kuchenesa kupfuura kitchenware yezvimwe zvinhu, uye ichacheneswa pamwe chete nekupukuta, uye haizoiti ngura kana kuita nhema.
3. Richienderana nehari isina simbi kana poto. Iyo enamel / enamel haina kugadzikana mumakemikari uye haizonyungudise mamwe macomputer (senge manganese, chromium uye zvimwe zvinokuvadza zvinhu) pakakwirira tembiricha kudzivirira kudyiwa kwevanhu.
4. Iva nehukama hwetsika nemhando yepamusoro yekutenda.
Kugadziriswa kweiyo enamel
1. Usati washandisa 1. Hutsva hwema enamel hari kana mapoto haafanire kunyikwa mumvura kwenguva yakareba. Kazhinji, geza uye soka kwemaminetsi 1-2. Mushure mekuchenesa, ndapota pukuta iyo micheto yakaoma munguva yekudzivirira ngura.
2. Paunenge uchishandisa ichangobva kutengwa enamel mapoto kana mapoto kekutanga, ndapota usapisa nekukurumidza nemvura inotonhorera, kuti udzikise hupenyu hwebasa hwechigadzirwa.
2. Mukushandisa 1. Ndokumbirawo uwedzere mvura uye mvura usati wapisa, uye usabike muto kuti uome panguva yekushandisa!
2. Paunenge uchishandisa hari ye enamel, edza kusashandisa maspura esimbi, zvipunu, nezvimwe.
3. Enamel chigadzirwa chisina kusimba, saka hachifanirwe kukandwa zvakaoma kudzivirira kurasikirwa nevhu.
4. Iyo enamel / enamel haisi nyore kushandura nhema pasi peyakajairika kushandiswa. Kana ikatsva kusvika kune nhema, ingoipukuta nepadhi yekutsvaira uye sipo.
5. Enamel inogona kushandiswa pamagetsi emagetsi, induction cookers, uye chaiwo gasi zvitofu, asi kwete muma microwave ovens.
3. Mushure mekushandisa, gara wakaoma uye wakachena mushure mekushandisa, uye suka mubato nepoto pamupendero kazhinji kudzivisa kuumbwa kwemitsipa yakasindimara.
Yakanyatsosarudzwa yakasarudzika zvinhu, yega yega maitiro inonyatso kudzorwa nehunhu hwekudzora vashandi, ichave isina kusimba uye isina kusimba enamel hari pamberi pako. Imba masikati tii, wedzera yakaisvonaka nzvimbo yekunaka kukicheni yako kana imba yekutandarira, zvipo shamwari ndidzo sarudzo dzako dzakanaka, pamwe unogona kuwana nguva yerudo rusingakanganwiki.
Main zvinhu: kabhoni simbi ndiro
Kuonekwa kwezvinhu: enamel
Ruvara (mufananidzo): Vashanyi tsika / sekuratidzwa kunoitwa nemufananidzo
Specification uye divi:
Kurongedza huwandu: Pasina 1.5L24pieces pabhokisi, 2.5Lonly18per bhokisi, 3L / 4L chete12per bhokisi
Nzvimbo yeArigin: Zhejiang china
Simba rekudyara: 10000 / zuva
Pashure: Enamel Kettle Set Teapot Carbon Simbi Enamel Kofi Keturu Tea Pot ine Lids
Zvadaro: Tea Pot Yekupedzisira Dhizaina Enamel Tea Keturu ine Lid
Enamel Kofi Tea Set
Enamel Pot Uye Mapani
Enamel hari Set
Enamel Tea Keturu
Vintage Enamel Tea Keturu
Enamel Keturu Teapot Carbon Simbi Enamel ChiArabic ...
Enamel keturu Set Teapot Carbon Simbi Enamel Co ...
China Factory Enamel Kofi Tea Set Keturu Enam ...
Enamel Kettle uye Teapot S / S Rim Ruva Dhizaini ...
Wholesale 2L enamel tii mvura ketero 2.5L teapo ...